Ilay talen'ny fikomiana tamin'ny Extinction Margaret Klein Salamon: "Ny dingana manaraka dia ny maneho ny marina fa misy ny fahamarinana": Martin Vrijland
Filed in Fikomiana mihintsy, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 10 Oktobra 2019	• 6 Comments
Ao ambadiky ny fikomiana extinction dia misy ny fikambanana matihanina satria fantatsika avy amin'ireo revolisiona miloko efa nampiasain'ny CIA efa am-polony taona nanala ny "mpanao didy jadona" ary nametraka ny dikan-demokrasia amerikanina. Fomba iray amin'ny 'fihetsiketsehana milamina' amin'ny vanim-potoana ankalazain'ny mpanjaka izany miaraka amin'ny mozika be dia be sy fivoriam-be nanaovana fihetsiketsehana, miaraka amina toby mahafinaritra. Ny fitaovam-piadiana lehibe amin'ny fananganana revolisiona toy izany dia ny media sosialy sy ny ezak'ireo mpilalao sarimihetsika malaza. Amin'ity tranga ity dia revolisiona miloko eran-tany izany, satria ny fampielezana ny fiovaovan'ny toetr'andro dia harabinger amin'ny famoronana governemanta manerantany.
Mila olana eran'izao tontolo izao ianao mba hanome vahaolana eran'izao tontolo izao. Ka avelao aloha ny orinasan-tsolika lehibe manolotra menaka marobe amin'ny orinasa plastika ary manolo ny tavoahangy sy ny tavoahangy ronono misy plastika ary ataovy azo antoka fa feno ranomasina ny ranomasina. Dan mahaforona olana CO2 ihany koa no antony mahatonga ny fiakaran'ny hafanana maneran-tany, dia mampiseho ny walrus vitsivitsy manipy ny vatany ilay antsoina hoe tsy fisian'ny ranomandry ary asio tovovavy henjana izay milalao amin'ny fihetseham-po ”Sahy ianao!"Ary vonona i Kees.
Izy io dia voalamina amin'ny alàlan'ny fikambanana manerantany matihanina. Revolisiona tena matihanina araka ny fantatsika avy amin'ny CIA. Ny tranokala theclimatemobilization.org miasa toy ny vavahadin-tserasera ny The Climate Mobilization fikambanana ary mazava fa misy vola lehibe ao aoriany. Ireo tranonkala fampiasa amin'ny haino aman-jery hafa dia ampiasaina hanaratsiana ny famatsiam-bola bara vitsivitsy, fa hevero fa misy milina tsara-menaka ao ambadik'izany ary tsy mandeha an-tsitrapo daholo akory izany. Na izany aza, tsy ho hitanao mihitsy ireo famatsiam-bola ireo, satria izany no fitsipiky ny serivisy tsiambaratelo: tsiambaratelo izany.
Margaret Klein Salamon dia mpitsabo aretin-tsaina momba ny aretin-tsaina, noho izany dia fantany kely momba ny filalaovana ny psyche olombelona. Mitranga amin'ny zava-drehetra ny zava-drehetra eo ambanin'ny rakotra hoe "Tena tsara ho an'ny tontolo iainana aho", fa andao ny ramatoa toy izany hangataka ny fahazoan-karama na ora fidirana ho an'ny toerany amin'ny maha Tale Mpanatanteraka ny The Climate Mobilization.
Ao amin'ilay fampisehoana etsy ambany dia ahitantsika ny fomba namirihan'ireo maso maty an'io clown tsy misy fotony io ao anaty fakantsary. Nohazavainy tamin'ny an-tsipiriany fa ny fomba fanao ao amin'ny vondrona Extinction Rebellion dia manao hetsika fanentanana miorina amin'ny psikolojia. Renay eto ny famaritana ny fampielezan-kevitra. Ary sasao vetivety amin'ny 11: minitra 30 handrenesana ny famaritan'ireto tovovavy sy tompokovavy ireto. "Lazainay ny marina ary avy eo mihetsika toy izany“, Inona moa no nolazain'i Ramatoa Salamon tao. Mazava ho azy, ny sasany dia hilaza fa midika izany fa tokony hanao zavatra araka ny fahamarinana izy ireo, fa raha ny marina dia mihodina ny resany manontolo amin'ny fanentanana ny olona eo imason'ny olona, ​​izay tsy taitra loatra amin'ny toe-javatra iainan'ny olombelona. Raha ny marina dia nohazavainy fa ny fikambanana dia naorina mba hanaitra ny tahotra eo amin'ny vahoaka. Tsy voamarina tanteraka izany tahotra izany ary fantatr'izy ireo ny tenany, fa ny tantara ankehitriny dia ny hoe "tokony hanitatra ihany" izany satria raha tsy izany dia tsy misy na inona na inona mitranga avy amin'ny governemanta. Mahasoa ny aretin-tsaina iray eo am-pelatanan'ny fikambanana demagaly toy izany, tsy izany ve?
Arotsaka anaty asa ihany koa ny fikambanana any Holandy. Ny mpamaky iray amin'ity tranokala ity dia nijerijery ny Vondelpark ary nahita ny fomba nandraisan'ny fikambanana sy nanoroany ny mpandray anjara momba ny firafitry ny fandaminana sy ny fomba fiasa. Ivotoerana eran'izao tontolo izao ny Revolisiona Kaody Revolisiona ary nitaona ny tanora hanosika ny fandaharam-potoana, tsy fantatra hoe mandady ny fasana izy ary miantso ny fanjakana manerantany ho amin'ny alàlan'ny olana iray feno. Mandoa vola bebe kokoa, fehezo ny zavatra rehetra vidianao sy amidinao tsy tapaka amin'ny alàlan'ny rafitry ny polisy manerantany.
Mitory hafa indray isika Fomba revolisiona loko Sharp loko (fomba CIA efa fanta-daza), fa tamin'ity indray mitoraka ity dia manerantany. Hitanay ny fomba mitovy tamin'ny andron'ny ady tany Yugoslavia, ny fikorontanana tany Ejipta sy i Ukraine ary tany amin'ny firenen-kafa maro manerantany. Izy io dia fomba iray tena kristaly voalamina tsara izay ampiasaina any Hong Kong indray. Hitantsika ny fomba mitovy amin'izany ao ambadiky ny Extinction Rebellion. Ity fomba ity dia niresaka matetika teto amin'ny tranokala nandritra ny Revolisiona Okrainiana, fa noho ny fahafaham-po kosa dia mandefa horonantsary eto aho momba ny vehivavy iray izay manazava tsara ny fomba Gene Sharp. Jereo ny rohy ato amin'ity lahatsoratra ity raha ny fampahalalana momba ny toetr'andro momba ny toetr'andro.
Tsy mino ve ianao fa mitory ny fomba Gene Sharp CIA? Dia vakio avy eo ny teny eto ambany:
Ny fanoratana lehibe voalohany dia tamin'ny endrika fampisehoana nomen'i Gail Bradbrook, iray amin'ny mpanorina ny Extinction Rebellion (XR ho fohy - ny vondrona anglisy britanika izay misahana ny fandrosoan'ny toetr'andro) ao amin'ny festival Off-Grid taona maromaro lasa izay, nanandratra azy. Revolisiona feno famindram-po / mitsangana! konsep / marika. Ao anatin'io, izy dia antsoina hoe Otpor !, ilay 'andrim-bozaka' manelingelina ny Serba 'Bulldozer Revolution' na 2000, toy ny hoe "andian-jaza fotsiny". Niresaka an-kafatra koa izy na Gene Sharp, izay paikady nampiharina tamin'io sy ny tsirairay antsoina hoe 'revolisiona loko' izay nifandimby namakivaky ny faritra maro eran'izao tontolo izao, izay niafara tamin'ny Lohataona Arabo, ka izany dia nanentana ny maro handray anjara amin'ny hetsika Occupy. (vakio tohizo eto ..)
Lisitry ny rohy loharano: notalotofpeopleknowthat.wordpress.com, nowhere.news
Tags: Bradbrook, toetr'andro, tale, lany tamingana, Featured, Gail, Gene, Klein, Margaret, fanentanana, mpanorina. mpanorina, fikomiana, revolisiona, Salamon, Sharp, ny
10 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 06
Jereo ihany koa ny lahatsary farany sy ny fifandraisan'i Jeffrey Epstein miaraka amin'ny lab media MIT sy ny fomba Gene Sharp, ao anatin'izany ny fifandraisana miaraka amin'ny Extinction Rebellion.
Mahaliana fa tsy izany!
10 Oktobra 2019 ao amin'ny 12: 12
Tsy menatra izahay. Eo am-pifandraisana an-kolaka fotsiny ny fomba Gene Sharp isika ary mitondra azy io ho zavatra tsara, tsy ampandrenesina fa natao ny hametraka rafitra manerantany polisy. Fomba CIA io ary mitaky ny fikambanana fa mampiasa izany fomba izany ho fandraisana an-tanana ho fandraisana an-tanana izany (ary hijanona eto ihany koa ny vahoaka):
15 Oktobra 2019 ao amin'ny 13: 33
10 Oktobra 2019 ao amin'ny 20: 04
Ny famatsiam-bola amin'ny asa toy izany dia azo atao ihany koa amin'ny fenitra FASB 56 kaonty, izay ahafahana mitandrina ny vola sasany tsy hita. Amin'izany, ara-dalàna avokoa ny fizarana vola amin'ny hetra.
FASB 56 = ASAM-PIVAVAHANA ARA-PITONDRANA "dia mamela ny masoivohom-panjakana" hanova "ny famoaham-bolam-panjakana ary hamindra ny fandaniam-bola avy amin'ny singa iray mankany amin'ny iray hafa. Izany koa dia mamela ny masoivoho federaly tsy hanaiky ny tsy fandoavan-ketra raha ary oviana no novana ny fanambarana momba ny volam-bahoaka.
Ny hetra dia alaina amin'ny antsoina hoe teti-bola, izay, na izany aza, dia tsy milaza na inona na inona momba ny toerana ara-bola ao amin'ny andrim-panjakana, koa ampio ny tatitra momba ny kaonty ara-bola amin'ny fenitra FASB 56 vaovao ary azonao atao ny mamatsy vola ny mainty.
CAFR - fitambaram-bolan'ny governemanta amerikana misy ny tatitra ara-bola an'ny fanjakana, monisipaly na orinasam-panjakana hafa izay mifanaraka amin'ny takian'ny kaonty izay namboarina avy amin'ny Birao momba ny kaonty amin'ny governemanta (GASB).
11 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 32
Ny ME dia nanary lalao baolina kitra tamin'ny tolakandro.
Ankehitriny ny ME dia herinandro feno alohan'ny fiposahan'ny andro, isan'andro, tsy amin'ny tolakandro ary toerana 1, tsy misy toerana am-polony.
Miampy ireo fiara fitateram-bahoaka AK rehetra miaraka amina tankina, soavaly, fiara fitateram-bahoaka, polisy amin'ny helikoptera moto? snsetra snsetra
Ahoana no handoavan'ny mpikomy an'io fanontaniana mahaliana io
12 Oktobra 2019 ao amin'ny 15: 54
Asabotsy Amsterdam 12 Oktobra 2019
Ireo mpitsangatsangana nanelingelina ny olona tamin'ny fametrahana rindrina manjera (ny tenany) amin'ny saina, miaraka na tsy misy saina dia napetraka androany tao amin'ny 12 Oct amin'ny toerana iray, izay hahafahan'ny tsirairay miditra ao amin'ny elanelan'ny km ary miditra amin'ny ora nanaovany izany. jereo ny rohy telegraaf izay nahitana sehatra lehibe indray.
Avy eo dia samy nandeha tamin'ny tranobe mafana misy azy ireo na izy ireo
manohiza miantsena ao amin'ny Kalverstraat. Ny ME dia tsy maintsy niasa kelikely kokoa ankehitriny satria ireo mpitsangantsangana an-tongotra nandeha an-dalambe teto an-drenivohitra nandritra ny herinandro manontolo.
Ny fiara mpamono fiara sy mpamono afo dia tsy maintsy nanao arofanina, satria vokatr'izany dia nanjary mahafaty ny tsy ampoizina.
Ny fiantsoanao amin'ny finday amin'ny fifamoivoizana dia lafo be anao, ny bisikileta amin'ny sisin-dàlana dia mandoa vola ianao
mandoa sainam-pirenena Nazi no handoa vola anao.
Fongotra ny fikomiana, fa avy eo mitodika, dia voaporofo fa manana toerana ambony izany
Voaporofo ihany koa fa natao an-kianja izany. Ka ny fandaharan'asan'ny governemanta mihitsy no manompo.
Mety ho mangarahara kokoa aza izany!
« Syria nanafintohina an'i Syria ho harbinger ho an'i Eoropa
Extinction Rebellion sy ny antso ho an'ny hetra avo sy ny fifehezana tanteraka ny antsipirian'ny fiainanao »
Total visits: 13.084.648